Weerar Ismiidaamin ah iyo Qaraxyo maanta gilgiley magaaalada Muqdisho – idalenews.com
Kolonyo baabuurta dowlada iyo kuwa AMISON oo maraayey agagaarka KM 4 lagula eegtey qarax ismiidaamin ah oo loola dan lahaa in lagu waxyeelo kolonyadaas wadada mareysey.
Baabuur waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ku qarxay isgoyska Lambar 4 ee magaalada Muqdisho xilli halkaa ay marayeen kolonyo gaadiid ah oo hay’ad Qadar ah leedahay. Illaa iyo hadda la ma sheegin in ay qasaare ka soo gaartay dadkii saarnaa kolonyada.
Babuurka qarxay ayaa waxaa uu ku qarxay meel boosteejo ah oo ku taal lambar 4 iyadoo halkaa uu ka dhashay qasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac. baabuurka qarxay ayaa la sheegay in uu ahaa babaurta yaryarka ah ee loo yaqaan CariB. Waxana qaraxa uu ka dhacay meel aan wax badan u jirin safaarada Turkiga ee magaalada Muqdisho.
Kolonyada gaadiidka ah ee lala beegsaday qaraxa ayaa waxaa ka mid ahaa baabuur uu lahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowlada federalka hase ahaatee xilligaasi uu saarneyn baabuurkaas.
Ciidamada booliska ayaa xiray wadooyinka soo gala lambar 4 iyadoo aan illaa iyo hadda la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkan ismiidaaminta ah.
Waxana weerarkan ismiidaaminta ah uu imanaya maalin kadib markii dib loo furay wadooyinka magaalada Muqdisho ayna dowlada Federalka ah sheegtay in ay ogaatay weeraro la qorsheynayo in lagu soo qaado dowlada.
Wararka u dambeeyay ee ka imanaya qaraxa ismiidaamin ah oo saaka ka dhacay isgoyska lambar afar ayaa sheegaya in sagaal ruux ay ku dhinteen 12 kalana ay ku dhaawacmeen qaraxan.
Qaraxan oo ka dhashay gaari waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa geystay qasaarihii ugu badnaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho tan iyo markii weerarka is qarxinta ahaa lagu qaaday maxkamada magaalada Muqdisho bartamihii bishii hore.
Dadka ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxan ayaa badankood waxa ay ahaayeen dad rayid ah oo badankood sugayay baabuur ay halkaas ka raacaan iyo qaar kale oo saarnaa baaburta Mini buska. In ku dhow toban baabuur oo nooca Mini Bus ka loo yaqaan ayaa ku gubatay qaraxan ismiidaaminta ah.
Hase yeeshee qaraxan ayaa waxaa ka badbaaday dadkii saarnaa kolonyo baabuur ah oo uu ka mid ahaa baabuur uu leeyahay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlada Federalka Soomaaliya.
Gudoomiyihii Gobalka Hiiraan Abdifataax Xasan Afrax oo loo magacaabey Qunsulka Soomaaliya ee Dalka Boqortooyada Sacuudi Arabia